Ho vita hatreo ve ny tantaran'i Madagascar Tribune
2008-12-10 @ 07:26 in Ankapobeny
Efa revo dia revo amin'ny fety ho avy amin'ity faran'ny taona ity ny tontolom-bolongana Malagasy ka tsy mahatsikaritra zavatra tsy mahazatra intsony. Marina tokoa aloha fa tsy azo helingelenina amin'ny fetiny mihitsy ny Malagasy fa zavatra masina tanteraka io aminy. Na izany aza tsy maintsy manoratra ihany ny tena eo anoloan'ny zavamisy.
Andro vitsivitsy izay dia tsy nivoaka teny an-talantalana amidy intsony ny gazety an-taratasy Madagascar Tribune raha mbola mivoaka kosa ny lahatsorany an-tserasera. Noho izay antony izay no mahatonga ny any ivelany tsy hahatsikaritra izay toe-javatra izay. Mifanontany ihany noho izany ny zatra mividy azy hoe lasa aiza ny nalehany. Dia mandeha ny resaka fa amidy na mitady mpividy ity gazety ity amin'izao fotoana izao, tsahoihany aloha izay fa ny ampitso no hanamabara amintsika izay tena marina.
Raha nisy ny gazety malagasy iray nanintona ahy tany alohaloha tany dia ity gazety ity. Nahay namakafaka tsara ireo manao gazety tao aminy. Singa iray tena nitiavako azy ny tsy nisian'ny horoscope tamin'ny takelany. Heveriko fa nanana ny fahalalahany ireo mpanao gazety tao, na nahay nifantina olona ny tompony, hany ka tsy mahagaga raha tafavoaka sy miavaka ireo mpanao gazety tao aminy ka lasa nikopak'elatra hanangana na hiasa amina gazety hafa.
Ny kilemany kosa indray dia ny tsy fahazoany dokambarotra mihitsy. Mety ho ny politikany tsy hanambaka ny mpividy ao aminy ho be takelaka nefa tsy misy vakiana no anton'izany nefa toa nandiso azy izany karazana fepetra tao aminy izany. Mety ho kilemany ilay tsy fametrahana ny fanandroana nolazaiko teo fa toa mila laingalainga ihany ny olona amin'ny ankapobeny. Sandan'ny fitiavan-kametraka ny marina tsy misy fitaka araka izay tratra angamba izao tsy fivoahan'ny gazety an-taratasy izao.
Enga anie handalo fotsiny izao fahasahiranany izao ka hiroborobo indray izy rehefa avy eo.